Funda Iintlobo zeeLuphu kunye neNgcaciso
Iintambo kunye neenkcazelo malunga nabo
Funda Okunye Ngomnye weeMpahla eziDala kunabo bonke
Iqonga libhekwa njengenye yezinto zomculo ezindala kakhulu ezenziwe ngabantu. Ngo-1995, abavubukuli bafumana umlenze owenziwe ngethambo empuma ye-Yurophu eneminyaka engama-43 000 ukuya kuma-80,000 ubudala.
Iintambo zintsimbi engenamanzi, isixhobo sokhuni. Iimvuthu zivelisa isandi ekuphumeni komoya phakathi kokuvula.
Amagqabhoko ngokubanzi afakwa kwiindidi ezibini eziphambili: umlenze ovuthayo, owuhlobo oluqhelekileyo olusetyenziswa namhlanje, kunye nesigidi esiphelile.
Iinguqulelo zasendulo zamacilongo eziye zacinywa zihlobo lweemivalo eziphelile.
Umfutho wokugqibela udlalwa ngokuvuthela ekupheleni kwiphubhu okanye ipayipi. Iimvalo eziphelile zineenkqutyana ezimbini, iintambo ezigubungelayo, kunye neengcingo zomzila.
Eyaziwa nangokuthi imirhubhe engacatshulwa, umrhubhe ogqithiselayo udlalwa ngokuvuthela phezulu kwiphubhu. Umoya ukwahlukana ngenxa yokuba ityhubhu ine-notch okanye iqonde eliphambili. Umzekelo wale ngxowankulu e-pan ehlala e-Andes Mountains yasePeru. Kukho iintlobo ezifanayo ezithandwayo eMiddle East nakumazwe aseAsia njengeChina, iJapan neKorea.
Umqhubi womzila uyaziwa nangokuthi umlenze womlilo. Idlalwa ngomoya ovuthayo kumzila. Umoya uhamba ngaphesheya kobukhali. Eminye imizekelo eqhelekileyo yomlingo womlilo uquka umlozo oqhelekileyo, umloli we-tin, irekhodi, kunye ne-ocarina.
Eyaziwa nangokuthi umtsalane ojikelezayo, umlenze ovuthayo ohlangothini uqhutywe ngasecaleni okanye ecaleni lokudlala.
Iimphambili zengqungquthela yeekhonsathi zanamhlanje zazingenazo iintsimbi eziphambili ezingenanto ezifana nezihlanu zanamhlanje. Imirhumo engapheliyo engapheliyo iyaqhubeka isetyenziswe kumculo wesintu, ingakumbi umculo womdabu wase-Ireland. Iimfuthane ezingenanto ezingapheliyo zisetyenzisiweyo kwixesha leBaroque nangaphambili.
Kule mibhobho yanamhlanje , nangona kunjalo, kukho iintlobo ezininzi eziphambili, zonke ezo ziphilileyo.
Ikhontrakthi yeContour in C
Iqonga lekhonsathi e-C, elibizwa ngokuba ngumlingo we-kontoni yaseNtshona, ngumlingo oqhelekileyo. Olu hlobo lwesigubhu lisetyenziswe kwiindibano ezininzi ezibandakanya amaqela ekhonsathi, ii-orchestras, amaqela omkhosi, amaqela okuhamba, amaqela e-jazz kunye namaqela amakhulu. Olu hlobo lwesigubhu luyi-C kwaye uluhlu lwayo lube ngaphezu kwama-octaves amathathu, ukususela kwi-middle middle C.
Umgqomo weBas kwiC
I-flute ye-bass e-C yahlaziywa nge-1920s njengenxalenye ye- saxophone kumculo we-jazz . I-octave enye ifakwe ngaphantsi komlenze womculo we-concert ku-C. Ukuvelisa ithoni ephantsi, ubude bebhubhu bude. Ngokuqhelekileyo zenziwe nge-J joint-headed joint, ezisa umoya (ingcaciso) ekufikeleleni kumdlali.
I-Alto Flute ku-G
I-flto flute ku-G inembali engaphezu kwe-100 ubudala. I-flto flute iyithuluzi lokutshintsha, esithetha ukuba umculo obhaliweyo kuyo kwimiba eyahlukileyo kunokuba uyisandi. I-flto flute ikhonjiswe okwesine ngaphezu kwezwi layo langempela. I-tube ye-flto flute iyancipha kwaye ide ngaphezu komgungqa oqhelekileyo kwaye idinga ukuphefumula komdlali. Ifolothi yenziwe ngentloko echanekileyo okanye ngamanye amaxesha, intloko edibeneyo ene-J ukuzisa ukuqhuma komtsalane kumdlali.
I-Tenor Flute eB B Flat
Umlenze wesigxina kwi-B flat ubizwa ngokuba ngumlenze we-amore okanye "umlenze wothando." Olu hlobo lomfutho lukholelwa ukuba luye lwaba khona ukusuka kumaxesha adlulileyo. Ngokuqhelekileyo igxothwe kwi-A okanye kwi-B kwaye isisiseko esiphakathi kwesiqhumane samabhantshi samanje kunye ne-alto flute ku-G.
I-Soprano Flute e-E Flat
Eyona nto ikhoyo ngoku, i-soprano igulane iqhutywe kwi-E flat, eyincinci encinci ngaphezu kweqonga lekhonsathi. Nguye kuphela ilungu leentsapho zamanqabunga zanamhlanje ezingafakwa kwiC okanye kwiG. Unamanani amathathu octaves.
Ukuguquka kweGlue kwiG
I-flute ye-flble ine-three octave range. I-G igubha ekhohlakeleyo ixanduva lokuhlabelela ingoma. Isixhobo sokutshintsha, oko kuthetha ukuba iphoswe kwisiqingatha ngaphezu kwesiqithiso sekonsathi. Ivakala isithandathu ukusuka kwincwadi ebhaliweyo.
Isixhobo asinqabile namhlanje, kuphela sihlandlo sithile sitholakala kwiiyuniti zomlambo okanye eminye imizila yokuhamba.
I-piccolo nayo ibiza ngokuthi i- ottavino e-Italy, isiqhekeza esingumlinganiselo wesiqingatha. Ivelisa isandi esine-octave esiphezulu kunomtsalane ojikelezayo. Unako ubuninzi beeminwe ezifanayo kunye nesihlobo sayo esikhulu. Yenziwe kwinqutyana yeC okanye iD Flat.
Iingoma ezi-Best Blues ze-Beginners
Amaxwebhu omculo womculo
Imvelaphi kunye Nefuthe loMculo WeMphefumlo
I-Jazz yamahhala kunye ne-Free Improvisation: Yintoni eyahlukileyo?
Rap Rap: I-Swing Double-edged Sword kwi-Hip-Hop
I-Bad Bad Luck Blues Iingoma
Iimbali ze-10 zeeKrismesi zeKrisimesi ezilungileyo kakhulu
I-I-IV - V Chord Pattern
Indlela yokwenza iCopper neBrass Cleaner
Iimfundiso zeBhayibhile eziphathelele ubuhlobo
UMargaret Beaufort Iimpawu kunye nexesha elifanelekileyo
IMyuziyam kaZwelonke yaseColombia
Ingxoxo yeDental Receptionist Ingxoxo - iNgesi yeenjongo zezoNyango
Ngaba Imali Yokukhuthaza Nezilondolozo Zentlawulo-Zichithwa?
Zingaphi Iindawo Eziya Emva Kwexesha?
I-E Major Scale kwiBass
IWolverine: isilwanyana esinyameni, isisigidi
Yiyiphi i-Caustic Soda kwaye Ungayifumana phi?
Indlela yokufumana i-Scholarship kwi-PSAT Score yakho
IJografi yeeGalapagos Islands
Yintoni Intsingiselo "Ephezulu"?
Iindlela ezi-3 zokufumana isenzo esingakumbi kwi-Windshield Wipers yakho
IKrisimesi eFransi: Iindaba ezimnandi zesiFrentshi-isiNgesi nge-Side Side
Iglosari yeMigqaliselo yeMigqaliselo
5 Imisebenzi yokuPhucula impumelelo yabaFundi abaQalayo